သီချင်းကို iCloud Music Library တွင်ထည့်ရန် ငါက Mac ကပါ
သီချင်းကို iCloud Music Library တွင်ထည့်သွင်းနည်း
သင်သည် Apple Music သီချင်းများနှင့်ဖွင့်ရန်စာရင်းများကိုကြည့်ရှုသောအခါ၊ သင် download လုပ်ချင်သောသီချင်းများစွာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ဤသီချင်းများအားလုံးကိုသင်၏စက်ပစ္စည်းများအားလုံးတွင်အလွယ်တကူရရှိနိုင်စေရန်၎င်းတို့ကိုထည့်သွင်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည် iCloud ဂီတစာကြည့်တိုက်, သင့်ရဲ့ဂီတစာကြည့်တိုက်။ ဒါကတကယ်လုပ်ဖို့အရမ်းလွယ်တယ်။
Browse through Apple ကဂီတ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဂီတကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်နားထောင်ခြင်း။ ထိုသီချင်းသို့မဟုတ်ဖွင့်စရာစာရင်းကိုသင်တွေ့ရှိသောအခါသင်၏ဂီတစာကြည့်တိုက်သို့ထည့်သွင်းလိုသည် iCloudသီချင်း၏ဘေးတွင်မြင်ရမည့်သုံးဖက်မြင်သင်္ကေတကိုထိပါ။
"+" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ သင်အပြည့်အဝဖွင့်စရာစာရင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အယ်လ်ဘမ်တစ်ခုကိုထည့်သွင်းလိုပါကထိပ်ဆုံးတွင်တွေ့ရမည့် + ကိုနှိပ်နိုင်သည်။ ဤ + အိုင်ကွန်ကိုသင်ရွေးချယ်သည့်အခါ၊ သီချင်း၊ ဖွင့်ရန်စာရင်းသို့မဟုတ်အယ်လ်ဘမ်ကိုကျွန်ုပ်၏ Music ထဲသို့ထည့်ပါ။ ယခုသင်သီချင်းကိုသင်အသုံးပြုသောကိရိယာတိုင်းတွင်ရနိုင်သည် iCloud ဂီတစာကြည့်တိုက်.
သီချင်းတစ်ပုဒ်သို့မဟုတ်သီချင်းစာရင်းကိုကျွန်ုပ်တေးဂီတထဲသို့ထည့်ပြီးသည်နှင့် + အိုင်ကွန်သည်အောက်ဖော်ပြပါလေးထောင့်ကွက်အတွင်းရှိမြှားပါသည့်သေးငယ်သည့်အိုင်ကွန်လေးတစ်ခုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ အင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်စရာမလိုဘဲသီချင်းသို့သီချင်း၊ အယ်လ်ဘမ်သို့မဟုတ်ဖွင့်ရန်စာရင်းကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အတွက် cloud ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
သင်လိုချင်လျှင်သင်လည်းလုပ်နိုင်သည် Apple Music မှသီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုဖျက်ပါ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » သီချင်းကို iCloud Music Library တွင်ထည့်သွင်းနည်း
OS X El Capitan သည် Twitter link များ၏အဖွင့်တွင်အမှားအယွင်းများရောက်ရှိခဲ့သည်
Bluetooth နားကြပ်ကို Apple TV အသစ်နှင့်မည်သို့ချိတ်ဆက်ရမည်နည်း